Iprofayile yenkampani - iTianjin Best Science and Technology Co., Ltd.
I-Tianjin Best Inzululwazi kunye neThekhinoloji Co., Ltd. (ITSHAYINA BGT) Liziko lezorhwebo nelorhwebo elibandakanyekayo ekuveliseni nasekuthumeleni kumazwe angaphandle amachiza obuchwephesha. ITSHAYINA BGT yasekwa ngonyaka ka-2000. Ezona mveliso ziphambili kukucacisa iarhente, enye iarhente ye-nucleating kunye nezongezo zokuphinda zisetyenziswe iiplastiki ezithunyelwe kumazwe amaninzi eMzantsi-mpuma weAsia, kuMbindi Mpuma naseYurophu phantse iminyaka engama-20 zilungile kwaye zizinzile umgangatho.
ITSHAYINA BGT inokubonelela ngoluhlu olupheleleyo lwearhente ye-nucleating, enjengokucacisa iarhente, iarhente ye-nucleating yokwandisa ukuqina kunye ne-agent-Crystal agent ye-nucleating. Ezi mveliso zinokusetyenziswa kwi-PP, PE, PET, PBT, NYLON, PA, EVA, POM kunye ne-TPU njl. ITSHAYINA BGT ikwanakho ukubonelela izibonelelo ezongezelelweyo kwindawo enye yokuqhubekeka nokuhlaziya iimveliso zeplastikhi, ezinje ngeRorver Remover, Ink Remover, Isitikhuphi sokususa, Ummeli weFavour njl njl ukunceda abasebenzisi ukugcina iindleko kunye nokwenza inzuzo ngakumbi kwimveliso. ITSHAYINA BGT ikwanakho ukubonelela izibonelelo ezongezelelweyo kwindawo enye yokuqhubekeka nokuhlaziya iimveliso zeplastikhi, ezinje ngeRorver Remover, Ink Remover, Isitikhuphi sokususa, Ummeli weFavour njl njl ukunceda abasebenzisi ukugcina iindleko kunye nokwenza inzuzo ngakumbi kwimveliso.
VIRTUE YOKUQALA NENZUZO Uqinisekile. Le yeyona ngcinga yethu isikhokelayo kwishishini.
Ukuba yitekhnoloji ephezulu, BGT iimveliso zineempawu zokucaca okuphezulu, akukho tyhefu, akukho livumba kwaye sele lidlulile "kuvavanyo lokutya kunye novavanyo lobutyhefu" kunye novavanyo lweRoHS yiSGS. Iimveliso inokusetyenziswa kunxibelelwano lokutya. I-China BGT ziya kuzinikezela ukukhuthaza ukusebenzisana okufutshane kunye nexesha elide kunye neenkampani ezingaphezulu kwamanye amazwe nakwamanye amazwe, ngokusekelwe kwimveliso yethu yezobuchwepheshe. I-China BGT uya kubonelela kubathengi bethu kungekuphela ngeemveliso ezilungileyo, kodwa kunye nomgangatho ozinzileyo, onyanisekileyo kunye nenkonzo engcono. Ngolwazi oluthe kratya, nceda undwendwele iwebhusayithi yethu: www.bgtcn.com kwaye www.bestchemical.cn okanye unxibelelane nathi ngebhokisi ye-imeyile njengoko kudwelisiwe kwiwebhusayithi.